WTVX, လှပသောအနောက် Palm Beach တွင်ဖလော်ရီဒါအတွက် entry-level Marketing ကိုအတိုင်ပင်ခံများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ client များနှင့်အတူချိတ်ဆက်သူတို့ကိုထိရောက်သောတီဗီနဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာမှတဆင့်မိမိတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီနိုင်သူတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာကြ၏။ အဆိုပါစံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးစိတ်အားထက်သန်ခြင်းနှင့်အသည်းအသန်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုဝင်စားမည်, တစ်ဦး tenacious သေးစာနာသဘောထားနှင့်အောင်မြင်နေတဲ့ drive ကိုရှိသည်!
အလုပ်အကိုင် Baltimore, MD အတွက်ရောင်းအားလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တာဝန်များပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်မထား:
ပြင်ဆင်. , ညှိနှိုင်းရန်နှင့် client ကိုမီဒီယာ လုပ်. ဝယ်ယူခြင်းများအကောင်အထည်ဖော်ရန်
က MS Word, Excel နဲ့ PowerPoint အတွက်တတ်ကျွမ်း
ယခင်: #NABShow 2017: ကြေညာချက်ပြန်လည်စုစည်းမှု: Next ကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးထုတ်လုပ်မှုစင်တာတွင်ဆက်သွယ်ရေးနှင့် MSG ကွန်ယက် Plan ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ!